Amụma nzuzo- Sinocare
Ngwọta Ngwaọrụ Njikwa Dijitalụ
Ngwaahịa nyochaghị ngwa ahịa
SARS-CoV-2 Ule Ngwaahịa
Amụma nzuzo a (“Amụma nzuzo”) na -akọwa etu Changsha Sinocare Inc na ndị enyemaka ya na ndị mmekọ na -ejikọ na ọkwa Nzuzo a - onye njikwa data ọ bụla - ("Nlekọta anya, ”“ Anyị, ”“ anyị ”ma ọ bụ“ anyị ”) nwere ike ịnakọta, jiri ma kesaa ozi metụtara gị dị ka onye okike amapụtara ma ọ bụ onye amata (“ Data nkeonwe ”).
Biko gụọ nke ọma ihe nzuzo a niile tupu iji weebụsaịtị, ozi email, ngwa na ekwentị, ngwa mgbasa ozi, wijetị, na ọrụ ndị ọzọ dị n'ịntanetị (“Ọrụ”) n'ihi na ọ ga - enyere gị aka ịghọta data anyị nakọtara, otu anyị si eji ma. kesaa ya, ma ihe ihe ị choro dabere na data ahụ.
Nlekọta anya nwere afọ iri na itoolu nwere ahụmịhe na ụlọ ọrụ BGM kemgbe ntọala ya na 19, ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ BGM na Asia na nke mbụ edepụtara ụlọ ọrụ glucose mita ọbara na China, na-arara nye ihe ọhụrụ nke teknụzụ biosensor, na-emepe emepe, n'ichepụta na ịzụ ahịa na ngwa ngwa. nchoputa ihe nyocha. Na 2002, mgbe nnweta nke ọma nke Nipro diagnostic Inc. (nke a na-akpọzi dị ka Trividia Health Inc.) na PTS Diagnostics Inc. Sinocare abụrụla onye mba ụwa na-ahụkarị glucose mita ọbara ise na otu n'ime ụlọ ọrụ na-eduga na POCT ụlọ ọrụ na ụwa.
Site n'inye ngwaahịa na ọrụ dị elu maka ndị nwere ọrịa shuga na ọrịa ndị ọzọ na-adịghị ala ala iji nyere ha aka imeziwanye ndụ ha.
Onye ndu ọkachamara n’ịrịa ọrịa shuga na China na BGM ọkachamara na ụwa.
Ilekọta LH .NANYA
Enyere “onyinye nturu ugo nke ndi n’enweta ego nke China nke 2020 China”
AKWKWỌ AKW PRKWỌ
Natara akwụkwọ ndebanye aha ngwaọrụ ahụike na nkwenye mmepụta na 2004. O wee gabigara ISO: 13485 nke EU TUV wee nata akwụkwọ CE na 2007.
Edepụtara site na Forbes dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ 200 nke "kachasị mma n'okpuru otu ijeri" Asia na 2015 dị ka nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta BGMS na Asia.
Enwetara ụlọ ọrụ shuga shuga isii nke ụwa. Banyere ogige ndị isi nke BGMS n'ụwa.
A Onye ndu na ulo oru
Launchedlọ ọrụ Sinocare Lu Valley Biosensor Manufacturing Facility nke dị na Changsha National High-Tech Industrial Development Mpaghara ka amalitere na 2013. N'ihe dị ka 66,000 m2 nnukwu mpaghara, ụlọ ọrụ anyị na-aghọ nnukwu usoro nyocha glucose ọbara (BGMS) na Asia.
Azụmaahịa anyị metụtara mba na mpaghara 135 n'ụwa.
Ihe karịrị pasent 63% OTC na ụlọ ahịa ọgwụ 130,000 na China.
Ngwaahịa anyị gụnyere glucose ọbara, ọbara ọbara, ketone ọbara, glycosylated hemoglobin (HbA1c), uric acid na ndị ọzọ na-egosi ọrịa shuga.
A EKWE ỌR EX
Dịka otu n'ime mmemme ngosipụta nke National Biomedical Engineering High-Tech Industrialization Program, Sinocare nwetara nkwado ego site na National Innovation Fund ruo ọtụtụ oge, wee gafere ISO: 13485 asambodo njikwa njikwa mma na asambodo CE na 2007.
ND D ỌR MAN ỌR D ỌR D
N'ime afọ 15 gara aga, akụkụ niile nke ndị ahịa n'ofe China anabatachala usoro nlekota glucose anyị ziri ezi, ọnụ, ma dị mfe iji, yana ihe karịrị 50% nke ndị na-enyocha ọrịa shuga na-eji ngwaahịa Sinocare. Anyị nwere ike iji nganga kwuo na anyị akụziwo nke ọma ma kwalite nlebara anya onwe anyị nke ọbara shuga maka ndị nwere ọrịa shuga na China.
Agbanyeghị, ịnweta usoro nlebara anya glucose ọbara bụ naanị ihe mbụ. Iji mezuo ebumnuche nke ịchịkwa ọkwa glucose n'ọbara nke ọma, ndị nwere ọrịa shuga kwesịrị ịmụ otu esi anwale glucose ọbara, oge iji nwalee, ugboro ole iji nwalee, na ihe a ga-eji data ahụ mee. E wezụga nke ahụ, otu esi eri nri na mmega ahụ ga-emetụta ọkwa glucose ọbara nke ọ bụla dị ka akụkụ nke oke. Iji nyere ndị na-arịa ọrịa shuga aka ịghọta akụkụ niile dị mkpa nke njikwa ọrịa shuga dabara na ebumnuche anyị, "Site na Ọbara Glucose Meter Onye Nkwalite na Ọkachamara Njikwa Ọrịa Shuga
Ebumnuche a na-akpali onye ọ bụla nọ na Sinocare: anyị enyefela usoro nyocha glucose ọbara na teknụzụ ndị toro eto, anyị mepụtara ndị nyocha nyocha dị iche iche iji nyekwuo ozi gbasara ọrịa shuga, anyị emepela usoro nlekọta ọrịa shuga nke ụlọ ọgwụ iji mechie njikọ n'etiti ndị dọkịta, ndị ọrịa, ndị dibịa , na ndị na-akụzi ọrịa shuga. N'ikpeazụ, anyị ga-etolite usoro nlekọta ọrịa shuga na-enye ihe ngwọta iji melite ogo ndụ maka ndị nwere ọrịa shuga, iji mee ka mmekọrịta dị n'etiti ndị na-enye ahụike na ndị ọrịa dị mfe, na iji meziwanye akụ na ụba ahụike maka ọha mmadụ.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ igosipụta ikike nzuzo nke data gị dị ka ekwuru n’okpuru ma ọ bụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ọkwa nzuzo a, ozi ịkpọtụrụ anyị dị ka ndị a:
Ntị: Onye isi nchekwa data
ekwentị: + 86 175 0843 8176
Kedu'sapp:+ 86 175 0843 8176
Ọrụ nke Nlekọta anyaNdị enyemaka na ụlọ ọrụ mmekọ nwere nke ọ bụla nwere, rụọ ma nye ya ndị enyemaka na ụlọ ọrụ dị otú ahụ. Biko pịa ebe a maka ndepụta nke Nlekọta anyandị enyemaka na ndị mmekọ. Agbanyeghị, ọkwa Nzuzo a na -achịkwa naanị ojiji nke Nlekọta anya Ọrụ ụlọ ọrụ na -ejikọ aka na ọkwa Nzuzo a. Ojiji nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ụfọdụ nwere ike ịdabere na ọkwa nzuzo ọzọ. Ndị ọzọ Nlekọta anya Ọrụ ụlọ ọrụ nwere ike jikọta ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ nye ọkwa nke ha, iche.
Omume nzuzo anyị nwere ike ịdị iche n'etiti obodo anyị na -arụ ọrụ iji gosipụta omume obodo yana ihe iwu chọrọ.
Nchịkọta data Nkeonwe
Anyị na-anakọta data nkeonwe yana ozi nkeonwe nke ị nyere anyị maka ịzụrụ ihe, rịọ ozi ma ọ bụ mmelite na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị, ma ọ bụ jiri Ọrụ ndị ọzọ. Anyị na-anakọta data nkeonwe yana ozi na-abụghị nkeonwe gbasara otu i si eji Ọrụ yana mmasị gị.
Anyị na -eji ozi gị, gụnyere data nkeonwe gị maka ebumnuche ndị a: Iji nye gị Ọrụ ndị ị rịọrọ, melite Ọrụ anyị, zụọ ahịa ngwaahịa anyị, ma detuo mmasị gị iji nye ahụmịhe onye ọrụ kacha mma enwere ike.
Ndabere iwu maka nhazi na ihe ga -esi na ya pụta
Anyị dabere na ụfọdụ usoro iwu maka nnakọta, nhazi na ojiji nke Data Nkeonwe gị, dị ka nhazi dị mkpa iji nye gị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ.
N'ozuzu, ịnye data nkeonwe gị bụ afọ ofufo, mana n'ọnọdụ ụfọdụ ọ dị mkpa. Enweghị ịnye data nkeonwe gị nwere ike butere gị ọghọm.
Ekekọrịta data nkeonwe yana ndị otu nke atọ
Anyị nwere ike ịkekọrịta data nkeonwe gị na ndị enyemaka anyị, ndị mmekọ anyị na ndị ọzọ ndị ọzọ n'ụwa niile iji gwa gị gbasara ngwaahịa na onyinye nwere ike ịmasị gị, dị ka iwu dabara adaba nyere.
Anyị nwekwara ike ịkekọrịta data nkeonwe gị na ndị na -enye ọrụ anyị n'ụwa niile, ndị achọrọ ka ha na -emeso data nkeonwe gị dị ka ọkwa nzuzo a, dị ka iwu chọrọ yana n'ọnọdụ ụfọdụ ndị ọzọ mgbe ị na -eji ndị na -enye ọrụ dị otú ahụ nye gị data nkeonwe ma ọ bụ ọrụ. site na Ọrụ anyị.
Ọdụ data mba ofesi
Ụfọdụ mba ma ọ bụ ikike nwere ike ha agaghị enye otu ụdị nchekwa data dị ka obodo nke anakọtara data onwe gị na mbụ, agbanyeghị anyị ga -eme ihe iji gaa n'ihu na -echekwa data nkeonwe gị nke ọma.
Nhọrọ na Ikike Gị
Ọ bụrụ na ịnọ na, ma ọ bụ ndị bi na, mpaghara mpaghara ụfọdụ, ị nwere ike ịnwe ọtụtụ ikike n'ihe gbasara data nkeonwe gị.
Ogologo oge ole ka anyị na -edobe data gị
Anyị anaghị edobe data nkeonwe gị ogologo oge karịa ka anyị kwesịrị ..
Anyị nwere ike ịnakọta data nkeonwe n'aka gị site n'iji Ọrụ ndị ahụ (ọkachasị, ọ bụrụ n'ịhọrọ ịnye ya), gụnyere enweghị mmachi:
· Aha gị, ozi-e, aha njirimara gị, akara ekwentị, ụlọ ọrụ na adresị (“Ozi Mkpọtụrụ”);
· Okike, afọ, nwa amaala, agụmakwụkwọ, ọrụ, ọrụ na ọkwa ego gị (“Ozi igwe mmadụ”);
· Nọmba kaadị kredit gị, adreesị ịgba ụgwọ, adreesị mbupu, koodu nchekwa na azụmahịa ịkwụ ụgwọ na nkọwa nkwenye ndị ọzọ (“Ozi ịkwụ ụgwọ”);
· Ele peeji nke na ngwaahịa, ihe ndị agbakwunyere na ụgbọ ibu azụmahịa gị, mgbasa ozi ndị ị pịrị, ozi ịntanetị sitere na anyị nke ị mepere, ụdị ihe nchọgharị, sistemụ arụmọrụ ("OS"), Adreesị Prontanetị (IP)) na adreesị na ngwaọrụ na ọnọdụ ( mkpokọta, "Ozi nyocha");
· Ozi banyere ọha na - enweta ozi gbasara gị site na isi mmalite ndị ọzọ, dị ka ọrụ nzipu ozi maka nkwenye adreesị mbupu;
· OS mkpanaaka gị, ihe ịchọpụta ngwaọrụ mkpanaka gụnyere anyị, ma ọ bụ ihe nchọpụta ekwentị ndị ọzọ na-ejikarị.
Anyị nwere ike ịnakọta data gbasara gị gbasara ndị ọzọ. Ọmụmaatụ, dị ka akụkụ nke anyị onye nkesa na akaụntụ ndebanye usoro, ị nwere ike inye aha, nọmba ekwentị, na email nke nhazi na teknuzu kọntaktị. Ọ bụrụ na ị nyefee anyị Ozi Onwe Onye ọ bụla gbasara mmadụ ọzọ, ị ga-ahụ maka ijide n'aka na ị nwere ikike ịme ya ma nye anyị ohere iji Data Nkeonwe ha dabere na Nzuzo Nzuzo a.
Anyị nwere ike ịnakọta Ozi Nkeonwe gị ma ọ bụ data ojiji nke ndị ọzọ, gụnyere na-enweghị mmachi:
· Enwere ike iziga adreesị ozi -e gị yana data nkeonwe ndị ọzọ anakọtara gbasara gị Nlekọta anya site na webụsaịtị ndị ọzọ mgbe ị rịọrọ Nlekọta anya ịkpọtụrụ gị site na webụsaịtị ndị ọzọ;
· Enwere ike iziga data nkeonwe gị Nlekọta anya mgbe ịhọrọ isonye na ngwa ma ọ bụ atụmatụ ndị ọzọ, dị ka nkata ndụ, otu n'ime ibe mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ ngwa yiri ma ọ bụ atụmatụ dị na webụsaịtị ndị ọzọ;
· Enwere ike iziga ozi nkeonwe ndị ọzọ Nlekọta anya site na ndị ọzọ iji jikọta na Data nkeonwe anyị na -anakọta site n'iji Ọrụ ndị ahụ iji kwalite ikike anyị nwere ijere gị ozi, ilekwasị anya na ọdịnaya anyị na -enye gị yana ịnye gị ohere ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị kwenyere na ọ nwere ike ịbụ. mmasị gị dabere na ozi anyị anakọtara.
Anyị ga -etinye usoro Nkwupụta Nzuzo anyị na Data Nkeonwe ọ bụla enwetara n'aka ndị ọzọ, belụsọ na anyị ekpughere gị ụzọ ọzọ. Nlekọta anya abụghị maka ọrụ mgbasa ozi nke atọ ndị a.
Anyị nwere ike iji data nkeonwe gị maka ebumnuche ndị a, dị ka iwu siri dị:
· Chazụta: Anyị nwere ike iji Ozi ịkpọtụrụ gị na ozi Paymentkwụ togwọ iji nye anyị ohere ịhazi ma mezue ịzụrụ ihe ị na-eme site na Ọrụ.
· Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa: Anyị nwere ike iji Ozi ịkpọtụrụ gị iji nata ma zaa ajụjụ gị banyere ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ akwụkwọ ikike na iji kpọtụrụ gị banyere asọmpi, nyocha ma ọ bụ usoro ị sweụ mmanya. Iji lebara ajụjụ gị anya, anyị nwekwara ike ịrịọ maka ụlọ ọrụ gị na / ma ọ bụ aha na adresịahịa nke resre gị ngwaahịa anyị.
· nzaghachi: Anyị nwere ike iji aha njirimara gị, adreesị ozi-e, ngwaahịa ndị azụrụ, na ọdịnaya ndị ọzọ na-eweta site na ị nwere ike ịnye mgbe ị na-atụle ma na-atụle ngwaahịa anyị.
· Ndebanye aha Weebụsaịtị: Anyị nwere ike iji ozi ịkpọtụrụ gị yana ozi okike mgbe ị mepụtara akaụntụ site na Ọrụ anyị ọ bụla iji nye gị ahụmịhe ọrụ ahaziri iche nke onwe.
· Nchịkọta: Mgbe i jiri Ọrụ ahụ, anyị na-anakọta ma jiri Ozi nyocha na-akpaghị aka iji mee ka ahụmịhe gị na Ọrụ anyị na-echekwa ahịa na mgbasa ozi nke Ngwaahịa anyị.
· Ahịa: Anyị nwere ike iji Data Nkeonwe gị chọpụta ihe ngwaahịa nwere ike ịmasị gị, nye gị nkwukọrịta ahịa (ọ gwụla ma ị sọpụrụ ụdị nkwukọrịta ahụ) yana iji duzie nchọpụta ahịa. Anyị nwekwara ike iji ozi ị nyere anyị, gụnyere ụlọ ọrụ gị, ma ị nwere ngwaahịa anyị, ahụmịhe na ngwaahịa anyị, yana ọdịnaya ndị sitere na ngwa maka ndị ahịa.
· Ọrụ Ndị Dabere na Ọnọdụ: Anyị nwere ike iji ọnọdụ gị ugbu a, adreesị enyere na / ma ọ bụ koodu zip iji nye gị ọnọdụ nke onye na-ere ahịa nke ngwaahịa anyị ma ọ bụ ozi ndị ọzọ kwesịrị ekwesị.
Anyị nwekwara ike iji data nkeonwe gị n'ụzọ ndị ọzọ kwekọrọ na ebumnuche akọwapụtara n'elu yana iji wepụta weebụsaịtị anyị ma nye gị ọrụ anyị.
Ogwe iwu maka nhazi na nsonaazụ ya
Anyị dabere na usoro iwu ndị a maka nnakọta, nhazi na ojiji nke data nkeonwe gị:
· nhazi ahụ dị mkpa iji nye Ọrụ dị ka ị rịọrọ;
· nkwenye gị;
· nhazi ahụ dị mkpa maka arụmọrụ nke nkwekọrịta nke ị bụ otu ma ọ bụ iji mee ihe mgbe ị rịọrọ tupu ịbanye nkwekọrịta;
· nhazi ahụ dị mkpa maka nnabata na iwu ọrụ enyere anyị aka n'okpuru anyị;
· nhazi ahụ dị mkpa maka ebumnuche ziri ezi nke anyị ma ọ bụ ndị ọzọ na-achụ, belụsọ (maka ndị bi na European Economic Area ("EEA")) ebe ọdịmma ma ọ bụ ikike na nnwere onwe dị mkpa nke gị nke chọrọ nchebe nke data onwe onye; ụdị mmasị dị otú a bụ mmezu nke ebumnuche nhazi ahụ edepụtara n'elu.
Na mkpokọta, onyinye nke Nkeonwe Nkeonwe gị bụ nke afọ ofufo, mana n'ọnọdụ ụfọdụ ọ dị mkpa iji banye anyị nkwekọrịta ma ọ bụ ịnata ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị dịka ịchọrọ.
Providinghapụ inye Onwe Gị Nkema nwere ike ibutere gị ọghọm - dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnweghị ike ịnweta ngwaahịa na ọrụ ụfọdụ. Agbanyeghị, belụsọ na akọwapụtara ya, ịnyeghị data nkeonwe gị agaghị ewetara gị nsonazụ nke iwu.
Rịba ama Nlekọta anya investors
Ụfọdụ ibe nke weebụsaịtị anyị na -enye ohere itinye ego Nlekọta anya iji nweta ozi dị n'ihu ọha metụtara arụmọrụ ụlọ ọrụ. Ndị ọchụnta ego nwere ike ịlele na/ma ọ bụ rịọ ụfọdụ ozi site na webụsaịtị anyị Ebe a. Dabere na ozi onye ọchụnta ego rịọrọ, akụkụ a nke webụsaịtị anyị nwere ike ịrịọ, onye na -etinye ego nwere ike họrọ ịnye, aha onye ọchụnta ego, aha ya, nzukọ ya, ọrụ ya, adreesị ya, akara ekwentị ya, na adreesị ozi -e (“Ozi onye na -etinye ego” ). Nlekọta anya ga -eji Ozi Onye Nweta iji nyochaa njirimara onye ọchụnta ego ma mezuo arịrịọ ọ bụla maka ozi.
Rịba ama maka ndị na -achọ ọrụ
Ụfọdụ ibe webụsaịtị anyị gụnyere ike maka ndị nwere mmasị ịrụrụ ha ọrụ Nlekọta anya ma ọ bụ otu ndị enyemaka ya ma ọ bụ ụlọ ọrụ iji chọpụta ozi ndị ọzọ gbasara ohere ọrụ na Nlekọta anya, ndị mmekọ ya na/ma ọ bụ ndị enyemaka ya. Iji tinye maka oghere mepere emepe site na iji webụsaịtị anyị, ị ga -enwerịrị ike ịmepụta profaịlụ ọrụ site na webụsaịtị anyị Ebe a, nke gunyere ozi na Nlekọta anya na -arịọ gị ka ịnye, yana ị nwere ike họrọ ịnye, ka echebara gị echiche maka ọrụ (“Ozi Onye anamachọ ọrụ”).
Tupu ịmepụta profaịlụ ọrụ, ị ga -ekwenye n'eziokwu na okwu nzuzo na -achịkwa nrubeisi nke ozi gị. Nlekọta anya maka ebumnuche ọrụ Ebe a. Usoro ndị ị kwenyere ka ịmepụta profaịlụ ọrụ ga -achịkwa Nlekọta anyana -eji ozi ị nyere iji tinye akwụkwọ maka ọrụ. Nlekọta anya ga -eji Ozi Onye anamachọ ọrụ maka ntule na ebumnuche ọrụ, yana nkwukọrịta na -aga n'ihu nyocha na ebumnuche ọrụ.
Anyị na-edobe usoro ọrụ na nhazi kwesịrị ekwesị iji kpuchido data nkeonwe gị, gụnyere ijide n'aka na ndị na-enye ọrụ ndị ọzọ na-enweta ma ọ bụ na-ejikwa Data nkeonwe na nnọchite anyị na ndị mmekọ na-enwe ụdị nchekwa a. Anyị na-achọ izochi nọmba kaadị kredit site na azụmahịa e-commerce emere na webụsaịtị anyị site na iji teknụzụ nchekwa echekwara ("SSL").
Agbanyeghị, ọ nweghị usoro nnyefe ịntanetị ma ọ bụ nchekwa elektrọnik echekwara 100% ma ọ bụ enweghị njehie, yabụ enweghị ike ikwe nkwa nchekwa zuru oke. Ị ga -echedo pụọ na ịnweta paswọọdụ gị na kọmputa gị n'enweghị ikike, wee hụ na ị ga -apụ mgbe emechara iji kọmpụta ekekọrịtara. Ọ bụrụ na ị nwere ihe mere ị ga -eji kwenye na mmekọrịta gị na anyị enweghịzi nchekwa (dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị chere na nchekwa nke akaụntụ ọ bụla ị nwere n'aka anyị emebiela), biko jiri email zie anyị ozi ozugbo. [email protected] ma ọ bụ site n'ịkpọ anyị na + 86 175 0843 8176
Ebe anyị nyere gị ma ọ bụ họrọ paswọọdụ nke na -enyere gị aka ịnweta akụkụ nke weebụsaịtị anyị, ọ bụ gị ka ọ dị n'aka idobe okwuntughe a. Ịkwesighi ịkekọrịta paswọọdụ gị na onye ọ bụla.
Enwere ike ibunye data nkeonwe anyị nakọtara ma ọ bụ nata gbasara gị na/ma ọ bụ hazie ya site na ahụ ndị dị n'ime ma ọ bụ na mpụga EEA.
Ụfọdụ ndị nnata nke Ozi Nkeonwe gị (leekwa nke dị n'okpuru) dị na mba nwere mkpebi zuru oke (ọkachasị, Canada (maka ndị otu na-abụghị nke ọha n'okpuru Iwu Nchedo Onwe Onye nke Canada na Iwu Akwụkwọ Eletrọniki) na Argentina), na, na ikpe ọ bụla, a na -esi na nke a amata nnyefe dị ka inye nchekwa data zuru oke site na echiche iwu nchekwa data Europe (lee Art. 45 Iwu Nchedo Data - "GDPR").
Ndị nnata ndị ọzọ nwere ike ịnọ na mba ndị na -anaghị etinye ọkwa nchekwa zuru oke site na usoro iwu nchekwa data Europe (ọkachasị, USA). Anyị ga -eme ihe niile dị mkpa iji hụ na echedoro mbufe si na EEA nke ọma dịka iwu nchekwa data chọrọ. N'ihe gbasara nnyefe na mba ndị na -enyeghị oke nchekwa data, anyị ga -ebufe nnyefe na nchekwa kwesịrị ekwesị, dị ka nkebi ahịrị nchekwa data nke European Commission ma ọ bụ onye njikwa nakweere (Art. 46 (2) (c) ma ọ bụ (d) GDPR), ụkpụrụ omume akwadoro yana nkwa na ntinye nke onye nnata (Art. 46 (2) (e) GDPR), ma ọ bụ usoro asambodo akwadoro yana nkwa na nnabata nke onye nnata (Art 46 (2) (f) GDPR). Ị nwere ike ịrịọ maka otu ụdị nchedo dabara adaba site na ịkpọtụrụ anyị dị ka ekwuru n'elu n'okpuru ngalaba ịkpọtụrụ anyị.
Anyị na -eji “kuki”, obere faịlụ ederede ebufere na ngwaọrụ gị, yana teknụzụ yiri ya (dịka, teknụzụ mkpado ịntanetị, mgbama weebụ na edemede agbakwunyere) iji nyere gị aka nye gị ahụmịhe onye ọrụ ka mma. Iji mụtakwuo gbasara otu anyị si eji kuki na ịgbanwe ntọala kuki gị, biko pịa ebe a.
Akara ngosi “Esola”
Ụfọdụ ihe nchọgharị ịntanetị na -etinye atụmatụ “esola” nke na -egosi weebụsaịtị ndị ị gara na ị chọghị ka esoro ọrụ gị n'ịntanetị. Nyere na ọ nweghị ụzọ edo edo nke ihe nchọgharị na -akpọsa akara “esola”, webụsaịtị anyị anaghị akọwa ugbu a, zaghachi ma ọ bụ gbanwee omume ha mgbe ha nwetara akara “esola”.
Anyị na -eji Google reCAPTCHA, nke bụ ọrụ efu na -echebe weebụsaịtị site na spam na mmegbu site na iji usoro nyocha ihe egwu dị elu iji gwa mmadụ na bots iche. Google reCAPTCHA na -arụ ọrụ dị iche iche dabere na ụdị ebugara. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike jụọ gị ka ị lelee igbe na -egosi na ị bụghị robot ma ọ bụ Google reCAPTCHA nwere ike chọpụta okporo ụzọ mkparị na -enweghị mmekọrịta onye ọrụ. Google reCAPTCHA na -arụ ọrụ site n'izipụ ụfọdụ ozi na Google, dị ka URL na -ezo aka, adreesị IP, omume onye ọbịa, ozi sistemụ arụmọrụ, ihe nchọgharị na ogologo oge nleta, kuki, na mmegharị òké. Ojiji Google reCAPTCHA dabere na nke Google amụma nzuzo na Usoro ojiji. Ozi ndị ọzọ gbasara Google reCAPTCHA yana otu o si arụ ọrụ dị Ebe a.
Anyị na -ekerịta data nkeonwe gị naanị na ụlọ ọrụ, otu na ndị nọ na mpụga Nlekọta anya dị ka akọwara n'okpuru.
· Ndị nnata n'ime Nlekọta anya na ndị nke atọ. Anyị nwere ike ịkekọrịta data nkeonwe gị Nlekọta anyaMgbakwunye na ụlọ ọrụ ndị ọzọ gburugburu ụwa, gụnyere ndị na -ere ahịa na -ejikọtaghị ọnụ, ndị na -emepụta ihe na ndị na -eweta ngwaahịa ka ụlọ ọrụ ndị a wee kpọtụrụ gị gbasara ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ onyinye ndị ọzọ nwere ike ịmasị gị. Anyị nwekwara ike ịkekọrịta data nkeonwe gị na ụfọdụ ndị mmekọ azụmahịa. Dabere na ngalaba nke Data nkeonwe yana ebumnuche nke anakọtara data nkeonwe, ụlọ ọrụ dị iche iche na ngalaba dị n'ime ụlọ ọrụ ndị a nwere ike ịnweta data nkeonwe gị. Dịka ọmụmaatụ, ngalaba IT anyị nwere ike ịnweta data akaụntụ gị, ngalaba ahịa na ahịa anyị nwere ike ịnweta data akaụntụ gị ma ọ bụ data metụtara iwu ngwaahịa. Ọzọkwa, ngalaba ndị ọzọ n'ime Nlekọta anya nwere ike ịnweta ụfọdụ Personal Data gbasara gị na mkpa ịmara, dị ka ngalaba iwu na nnabata, ngalaba ego ma ọ bụ nyocha nke ime. Amụma nzuzo a anaghị achịkwa webụsaịtị ndị ọzọ ejikọtaghị ma ọ bụ webụsaịtị ọ bụla na-ejikọghị na ọkwa Nzuzo a.
· Ndị na-enye ọrụ. Anyị nwere ike ịkekọrịta data nkeonwe gị na ụlọ ọrụ mmekọ na ndị na -ejikọtaghị ọnụ na -arụ ọrụ na nnọchite anyị metụtara azụmahịa anyị. Ọrụ ndị dị otú a gụnyere ịkwụ ụgwọ nhazi, imezu iwu, inyefe ngwugwu, ọrụ mpaghara, nyocha webụsaịtị ma ọ bụ data ojiji ngwa mkpanaka, ọrụ ndị ahịa, ọrụ elektrọnik na nzipu ozi, asọmpi/nyocha/nchịkwa nchịkwa, ọrụ ahịa, azụmahịa mmekọrịta mmadụ na ibe na ọrụ mgbasa ozi (dịka. ntule, nyocha, nzukọ), na ịgbakọ, jikwaa na ịkọ ụtụ ụtụ ahịa. Ndị na-ahụ maka ọrụ ndị ọzọ na-enweta Data nkeonwe gị dịka ọ dị mkpa iji rụọ ọrụ ha, anyị na-enyekwa ha iwu ka ha ghara iji data nkeonwe gị maka ebumnuche ọ bụla.
· Dị ka Iwu chọrọ ma ọ bụ dabara adaba. Anyị ga -eji ma gosipụta data nkeonwe gị dịka iwu dabara adaba nyere, gụnyere enweghị mmachi:
o N'okpuru iwu dị adị, gụnyere iwu na mpụga obodo obibi gị, ịgbaso usoro iwu yana ịza arịrịọ sitere n'aka ndị ọrụ gọọmentị na nke gọọmentị, gụnyere ndị ọrụ ọha na nke gọọmentị na mpụga obodo gị;
o Iji mezuo usoro na ọnọdụ anyị, gụnyere nyocha gbasara imebi ya;
o Ịchọpụta, gbochie ma ọ bụ dozie okwu aghụghọ, nche ma ọ bụ okwu nka; na
o Iji kpuchido ọrụ anyị ma ọ bụ nke ndị mmekọ anyị; iji kpuchido ikike anyị, nzuzo, nchekwa ma ọ bụ ihe onwunwe, yana/ma ọ bụ nke ndị mmekọ anyị, gị ma ọ bụ ndị ọzọ; na ikwe ka anyị gbasoo ọgwụ ndị dịnụ ma ọ bụ belata mmebi nke anyị nwere ike ịkwagide.
· Inye ahia. Ka anyị na -aga n'ihu ịzụlite azụmaahịa anyị, anyị nwere ike ree ma ọ bụ zụta akara, ụlọ ahịa, ndị enyemaka ma ọ bụ ngalaba azụmahịa. Anyị nwere ike ịkekọrịta na/ma ọ bụ bufee data nkeonwe gị na ndị ọzọ na ụdị azụmahịa a (gụnyere na -enweghị mmachi, nhazi ọ bụla, njikọta, ire ere, njikọ aka ọnụ, ọrụ, nyefe ma ọ bụ ọnọdụ ndị ọzọ niile ma ọ bụ akụkụ ọ bụla nke azụmahịa anyị, ụdị, ndị mmekọ. , enyemaka ma ọ bụ akụ ndị ọzọ). Ozi ndị ahịa n'ozuzu bụ otu n'ime akụ azụmaahịa ebugharị, mana ọ na -edobe n'okpuru ọkwa ọkwa nzuzo ọ bụla dị adị.
Anyị nwere ike ịkekọrịta data agbakwunyere na -amaghị aha (ka a ghara ịmata gị) na ndị ọzọ - dị ka ndị mbipụta akwụkwọ, ndị mgbasa ozi ma ọ bụ weebụsaịtị webụ - ma nwee ike mee ka data a dị n'ihu ọha. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike kerịta ozi n'ihu ọha iji gosi ọnọdụ gbasara ojiji n'ozuzu nke ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa anyị.
Ebe nrụọrụ weebụ anyị nwere ike ịnye blọọgụ nwere ike ị nweta n'ihu ọha, bọọdụ ozi, ma ọ bụ nzukọ ọgbakọ. Ị kwesịrị ịmara na ozi ọ bụla ị nyere na mpaghara ndị a nwere ike gụọ, chịkọta ma jiri ndị ọzọ na -enweta ha nweta ya.
Njikọ na ịkparịta ụka n'Ịntanet na webụsaịtị ndị ọzọ atọ
Ọrụ anyị nwere ike ịnwe njikọ nke ịkparịta ụka n'Ịntanet na webụsaịtị ndị ọzọ yana ngwa mkpanaka nke ndị ọzọ na -ejikwa ma na -achịkwa. Ọ bụ ezie na anyị na -agbalị ijikọ naanị na weebụsaịtị nke na -ekerịta ụkpụrụ anyị dị elu na nkwanye ùgwù maka nzuzo, anyị anaghị eburu ibu ọrụ maka ọdịnaya ma ọ bụ omume nzuzo nke weebụsaịtị ndị ọzọ na -arụ. Ọ gwụla ma ekwuputaghị n'ụzọ ọzọ, data nkeonwe ọ bụla ị nyere webụsaịtị ndị ọzọ dị otu a ga -anakọta ma ọ bụghị anyị, ọ ga -edobekwa iwu nzuzo nke otu ahụ (ọ bụrụ na ọ dị), karịa ọkwa Nzuzo a. N'ọnọdụ dị otú a, anyị agaghị enwe ike ịchịkwa, anyị agaghịkwa aza ajụjụ maka ojiji otu ahụ jiri data nkeonwe ị nyere ha.
N'ikwekọ na Iwu Nchedo Ntaneti Ụmụaka, 15 USC, §§ 6501-06 na 16 CFR, 312.1 312.12-13, webụsaịtị anyị anaghị anabata ụmụaka na-erubeghị afọ 13 ka ha bụrụ ndị ọrụ, anyị anaghị ama ụma nakọta ozi. site na ụmụaka. Site n'iji webụsaịtị anyị, ị na -anọchite anya na ị dị afọ XNUMX ma ọ bụ karịa.
Ọ bụrụ na ịnọ na, ma ọ bụ ndị bi na, mpaghara mpaghara ụfọdụ, ị nwere ike ịnwe ọtụtụ ikike n'ihe gbasara Data Nkeonwe gị, dị ka akọwara n'okpuru.
Ndị bi na South Africa
Biko hụ agbakwunyere nkwupụta nzuzo nke mpụga na nweta akwụkwọ ntuziaka na -emetụta South Africa.
Ndị bi na EEA
Ọ bụrụ na ịnọ na EEA mgbe ị na -enweta ọrụ ndị ahụ, ma ọ bụ onye na -ahụ maka data dị ka akọwara ọzọ n'elu na ngalaba Nchịkọta dị na EEA, ihe ndị a na -emetụta:
Ọ bụrụ na ikwuwapụta nkwenye gị gbasara mkpokọta, nhazi na iji data nkeonwe gị (ọkachasị gbasara nnata nkwukọrịta ahịa ahịa site na email, SMS/MMS, faksị, na ekwentị - ebe ọ dị), ị nwere ike wepu nkwenye a n'oge ọ bụla. oge nwere mmetụta n'ọdịnihu. Ọzọkwa, ị nwere ike jụ iji ojiji nkeonwe gị maka ebumnuche ahịa.
Biko mara na enwere ike gbanwee ikike ndị a kpọtụrụ aha n'elu n'okpuru iwu nchekwa data dị. N'okpuru, biko chọtakwuo ozi gbasara ikike gị ruo n'ókè GDPR na -emetụta (maka izere obi abụọ ihe ndị a na -emetụta naanị ma ọ bụrụ na ịnọ na EEA mgbe ị na -enweta ọrụ ma ọ bụ onye njikwa data dị ka akọwara n'elu n'elu na ngalaba Isi. na EEA):
(i) Ikike ịrịọ ka ịnweta data nkeonwe gị
Ị nwere ike ịnwe ikike ịnweta n'aka anyị nkwenye ma a na -ahazi data gbasara gị ma ọ bụ na, ebe nke ahụ bụ, ịrịọ ka ịnweta data nkeonwe. Ozi nnweta a gụnyere ebumnuche nhazi, ụdị nke data gbasara onwe ya, yana ndị nnata ma ọ bụ otu onye nnata nke amalarị ma ọ bụ ga -ekpughere ya.
Ị nwere ike ịnwe ikike ịnweta nnomi nke Personal Data na -arụ ọrụ nhazi. Maka mbipụta ndị ọzọ ị rịọrọ, anyị nwere ike ịnara ụgwọ ezi uche dabere na ụgwọ nchịkwa.
(ii) Ikike ịrịọ ndozi
Ị nwere ike ịnwe ikike ịnweta n'aka anyị mgbazi nke ezighi ezi nkeonwe gbasara gị. Dabere na ebumnuche nhazi, ị nwere ike ịnwe ikike imezu Data nkeonwe gị nke na -ezughị ezu, gụnyere site n'inye nkwupụta mgbakwunye.
(iii) Ikike ịrịọ nhichapụ (ikike echefuru echefu)
N'okpuru ọnọdụ ụfọdụ, ị nwere ike ịnwe ikike ịnweta n'aka anyị nhichapụ nke Data Nkeonwe gbasara gị yana anyị nwere ike ga -emerịrị ka anyị hichapụ ụdị Ozi Nkeonwe.
(iv) Ikike ịrịọ mmachi nhazi
N'okpuru ọnọdụ ụfọdụ, ị nwere ike ịnwe ikike ịnweta n'aka anyị mmachi nhazi data nkeonwe gị. N'ọnọdụ dị otú a, a ga -ama akara nke ọ bụla ma enwere ike ịhazi ya naanị maka ebumnuche ụfọdụ.
(v) Ikike ịrịọ ka ebugharị data
N'ọnọdụ ụfọdụ, ị nwere ike ịnwe ikike ịnata Ozi Nkeonwe gbasara gị, nke ị nyela anyị, n'ụdị ahaziri, nke a na-ejikarị na nke enwere ike ịgụ na igwe yana ị nwere ike nwee ikike ibunye data ahụ n'aka onye ọzọ na-enweghị ihe mgbochi. n'aka anyị.
(vi) Ikike ịjụ ihe
N'okpuru ọnọdụ ụfọdụ, ị nwere ike ịnwe ikike ịjụ, dabere na ọnọdụ gị, n'oge ọ bụla maka nhazi nkeonwe nkeonwe anyị nwere ike chọọ ka anyị gharazie ịhazi data nkeonwe gị. Enwere ike itinye ikike dị otú ahụ ịjụ ihe ma ọ bụrụ Nlekọta anya na -anakọta na hazie data nkeonwe gị maka ebumnuche profaịlụ ka ị nwee ike ghọta ọdịmma azụmahịa gị nke ọma Nlekọta anyangwaahịa na ọrụ. Ọzọkwa ị nwere ike jụ iji data gị maka ebumnuche ire ahịa. Ọ bụrụ na ị nwere ikike ịjụ ma jiri ikike a mee ihe, anyị agaghị ahazi data nkeonwe gị maka ebumnuche ndị a. N'iji ikike a biko kpọtụrụ anyị dị ka ekwuru n'elu n'okpuru ngalaba na -akpọtụrụ anyị. N'okpuru ọnọdụ ụfọdụ, ị nwere ike ịnwe ikike ịjụ, dabere na ọnọdụ gị, n'oge ọ bụla maka nhazi data nkeonwe anyị na anyị enwere ike ịchọ ka ọ gharazie ịhazi data nkeonwe gị. Enwere ike itinye ikike dị otú ahụ ịjụ ihe ma ọ bụrụ Nlekọta anya na -anakọta na hazie data nkeonwe gị maka ebumnuche profaịlụ ka ị nwee ike ghọta ọdịmma azụmahịa gị nke ọma Nlekọta anyangwaahịa na ọrụ. Ọzọkwa ị nwere ike jụ iji data gị maka ebumnuche ire ahịa. Ọ bụrụ na ị nwere ikike ịjụ ma jiri ikike a mee ihe, anyị agaghị ahazi data nkeonwe gị maka ebumnuche ndị a. Iji nweta ikike a, biko kpọtụrụ anyị dị ka ekwuru n'elu n'okpuru ngalaba ịkpọtụrụ anyị.
Agbanyeghị, ikike dị otú ahụ ịjụ nwere ike ọgaghị adị ma ọ bụrụ na nhazi nke Data Nkeonwe gị dị mkpa iji mee ihe tupu ịbanye na nkwekọrịta ma ọ bụ ime nkwekọrịta nke kwubiri.
Ọ bụrụ na ị nyere anyị nkwenye gị maka ebumnuche ire ahịa (dịka ọmụmaatụ, ị denyere aha n'akwụkwọ akụkọ anyị nke ọma) ị nwere ike wepu nkwenye gị dịka akọwara n'elu akụkụ a.
(vii) Ikike ndị ọzọ dị na mkpebi mkpebi akpaghị aka
Ọzọkwa, n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ gbasara mkpebi onwe onye na-akpaghị aka, ị nwere ikike ịnweta enyemaka mmadụ, kwupụta echiche gị, ma zọọ mkpebi a.
Ị nwekwara ike ị nweta akwụkwọ mkpesa na ikike nlekọta nlekọta nchekwa data tozuru etozu. Ị nwere ike gbuo ikike a na ikike nleba anya ọkachasị na ndị otu EEA nke ebe obibi gị, ebe ọrụ ma ọ bụ ebe ịda iwu ebubo.
Ogologo oge ole ka anyị ga-edebe data gị
A ga -edobe data nkeonwe gị ma ọ bụrụhaala na ọ dị mkpa iji nye gị ọrụ na ngwaahịa achọrọ. Ozugbo ị kwụsịrị mmekọrịta gị na anyị, anyị ga -ehichapụ data nkeonwe gị ma ọ bụ kpochapụ data nkeonwe gị, belụsọ na achọrọ njigide nke iwu (dịka maka ebumnuche ụtụ isi). Anyị nwere ike idowe nkọwa kọntaktị na mmasị gị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị ogologo oge ma ọ bụrụ na ị nyere anyị ohere izitere gị ihe ahịa. Anyị nwekwara ike idobe data nkeonwe gị mgbe njedebe nke mmekọrịta nkwekọrịta ma ọ bụrụ na data nkeonwe gị dị mkpa iji rube isi n'iwu ndị ọzọ metụtara ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị chọrọ data nkeonwe gị iji guzobe, gosipụta ma ọ bụ gbachitere nkwupụta iwu, na mkpa ịmara naanị . Ruo oke o kwere mee, anyị ga -amachibido nhazi data nkeonwe gị maka ebumnuche ndị a pere mpe mgbe njedebe nke mmekọrịta nkwekọrịta.
Ndị bi na Nevada
Iwu Nevada na-enye ndị bi na Nevada ohere ịpụ na ire ụdị ozi nkeonwe. N'okpuru ọtụtụ ihe dịpụrụ adịpụ, iwu Nevada na -akọwa “ire ere” nke pụtara ịgbanwere ụdị ozi nkeonwe maka ịtụle ego maka mmadụ maka onye inye ikike ma ọ bụ resị ndị ọzọ ozi ahụ. Anyị anaghị ere ozi nkeonwe ugbu a dị ka akọwara n'iwu Nevada. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị bụ onye bi na Nevada, ị ka nwere ike nyefee arịrịọ akwadoro ka ịpụ ahịa ma anyị ga-edekọ ntuziaka gị ma tinye ha n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na iwu anyị agbanwee. Enwere ike iziga arịrịọ ịwepu aha na: [email protected].
Ndị bi na California
Iwu Nzuzo Ndị Ahịa California, Cal. Ọha. Koodu § 1798.100 et seq. (“CCPA”), chọrọ ka anyị nye ndị bi na California ọkwa nzuzo nke nwere nkọwa zuru oke nke omume anyị n'ịntanetị na nke offline gbasara nnakọta, ojiji, mkpughe, na ire ozi nkeonwe yana ikike ndị bi na California gbasara onwe ha. ozi. Akụkụ a nke ọkwa nzuzo bụ maka naanị, yana maka ndị bi na California. Ọ bụrụ na ịnọghị na California, nke a anaghị emetụta gị ma ịkwesighi ịdabere na ya.
CCPA na -akọwa “ozi nkeonwe” pụtara ozi na -akọwapụta, metụtara, kọwaa, nwere ike nwee ike ijikọ ya, ma ọ bụ nwee ike jikọta ya ozugbo, ya na otu onye bi na California ma ọ bụ ezinụlọ. Ozi nkeonwe anaghị agụnye ozi ọhaneze, nke akọwapụtara ma ọ bụ mkpokọta. Maka ebumnuche nke ngalaba ndị bi na California a, anyị ga -akpọ ozi a dị ka “Ozi Nkeonwe.”
CCPA nwere mwepụ dị anyị mkpa. Ụfọdụ ikike nzuzo CCPA kọwara n'okpuru anaghị emetụta Ozi Nkeonwe anakọtara na ọnọdụ azụmahịa na azụmahịa. Nke ahụ bụ ozi na -egosipụta nkwukọrịta ederede ma ọ bụ okwu ọnụ ma ọ bụ azụmahịa n'etiti anyị na onye na -azụ ahịa, ebe onye na -azụ ahịa na -arụ ọrụ dị ka onye ọrụ, onye nwe ya, onye isi ya, onye ọrụ ya, ma ọ bụ onye ọrụ nkwekọrịta nke ụlọ ọrụ ọzọ yana mgbe nkwukọrịta ma ọ bụ azụmahịa ahụ na -eme naanị n'ime ọnọdụ. anyị na -eduzi ịdị uchu gbasara, ma ọ bụ nye ma ọ bụ nata ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nye ma ọ bụ si, ụdị ihe ahụ.
(i) Ikike imata gbasara ozi nkeonwe anakọtara, kpughee, ma ọ bụ ree ya
Ọ bụrụ na ị bụ onye bi na California, ị nwere ikike ịrịọ ka anyị kpughee ozi nkeonwe anyị anakọtara gbasara gị. Ikike a gụnyere ikike ịrịọ nke ọ bụla ma ọ bụ ihe ndị a niile:
· Akụkụ ụfọdụ nke Ozi Nkeonwe anyị anakọtara gbasara gị;
· Ngalaba nke ozi nkeonwe anyị nakọtara maka gị;
· Ngalaba isi mmalite nke anakọtara ozi nkeonwe;
· Ngalaba nke Ozi Nkeonwe anyị rere (ọ bụrụ na ọdabara) ma ọ bụ kpughere maka ebumnuche azụmahịa gbasara gị;
· Ngalaba nke ndị ọzọ e rere Ozi Nkeonwe (ọ bụrụ na ọdabara) ma ọ bụ kpughere maka ebumnuche azụmahịa; na
· Ebumnuche azụmaahịa ma ọ bụ azụmaahịa maka ịnakọta ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọdabara, na -ere Ozi Nkeonwe.
Nchịkọta Ozi Nkeonwe
Anyị na -anakọta ugbu a na, n'ime ọnwa iri na abụọ tupu ụbọchị '' edegharịrị ikpeazụ '' nke ọkwa Nzuzo a, anakọtara ụdị ozi nkeonwe gbasara ndị bi na California ozugbo site n'aka ha na site n'aka ndị na -ere data, ụlọ ọrụ gọọmentị, ndị mmekọ azụmahịa na ndị mmekọ:
· Ihe nchọpụta (aha, adreesị ozi, adreesị protocol ịntanetị, adreesị ozi -e, aha akaụntụ)
· Ihe nchọpụta onwe onye pụrụ iche (kuki, mgbama, mkpado pixel, njirimara mgbasa ozi mkpanaka, ma ọ bụ teknụzụ ndị ọzọ yiri ya; nọmba ndị ahịa, pseudonym pụrụ iche ma ọ bụ aha onye ọrụ; akara ekwentị, ma ọ bụ ụdị ndị ọzọ na -adịgide adịgide ma ọ bụ nke nwere ike bụrụ nke enwere ike iji mata onye ahịa ma ọ bụ ngwaọrụ)
· Nọmba ekwentị
· Nọmba kaadị kredit na debit
· Ozi ego ndị ọzọ (dịka, ego ezinụlọ, nọmba anaghị atụ ụtụ)
· Ozi ọ bụla dị na ngwa ndị ahịa yana akụkọ ihe mere eme, gụnyere ndekọ mkpesa, ma ọ bụrụ na ejikọtara ozi ma ọ bụ nwee njikọ dị mma na ndị ahịa ma ọ bụ ezinụlọ, gụnyere site na ngwaọrụ, nke azụmahịa ma ọ bụ onye na -eweta ọrụ.
· Ịntanetị ma ọ bụ ozi ọrụ netwọk eletrọnịkị ọzọ (akụkọ ihe mere eme nchọgharị na ozi gbasara mmekọrịta onye ahịa na webụsaịtị, ngwa ma ọ bụ mgbasa ozi)
· Ihe data geolocation
· Ozi azụmaahịa (ndekọ nke ihe nkeonwe, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ azụtara, nweta ma ọ bụ tụlee; ịzụta ma ọ bụ iri akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ ọchịchọ)
· Ozi nkuzi
· Ozi ma ọ bụ ozi metụtara ọrụ
· Njirimara nhazi ọkwa echekwara n'okpuru California ma ọ bụ iwu gọọmentị etiti (dịka, okike na ọnọdụ alụmdi na nwunye)
· Nsonaazụ sitere na ozi dị n'elu iji mepụta profaịlụ gbasara onye na -azụ ahịa na -egosipụta mmasị onye ahịa, njirimara, ọnọdụ akparamagwa, amụma, omume, akparamagwa, ọgụgụ isi, ikike na nka.
Na mgbakwunye na ebumnuche ekwuru n'elu na ngalaba Otu anyị si eji data nkeonwe gị, anyị na -anakọta ugbu a, anakọtala ma ree, ụdị ozi nke dị n'elu maka azụmahịa ma ọ bụ ebumnuche azụmahịa ndị a:
· Nnyocha nke metụtara mmekọrịta dị ugbu a na onye na -azụ ahịa yana otu azụmahịa, gụnyere, mana ọnweghị oke na, ịgụta ndị mgbasa ozi pụrụ iche echiche mgbasa ozi
· Ịchọpụta ihe merenụ echedoro, ichebe pụọ na obi ọjọọ, aghụghọ, wayo, ma ọ bụ ọrụ megidere iwu, yana ịgba ndị na -ahụ maka ọrụ ahụ ikpe.
· Debug na -achọpụta ma rụzie mperi ndị na -emebi arụmọrụ eburu n'uche
· Ịrụ ọrụ, gụnyere idobe ma ọ bụ ịrụ ọrụ akaụntụ, inye ọrụ ndị ahịa, nhazi ma ọ bụ imezu iwu na azụmahịa, ikwenye ozi ndị ahịa, ịkwụ ụgwọ nhazi, inye ego, inye mgbasa ozi ma ọ bụ ọrụ ịre ahịa, inye ọrụ nyocha, ma ọ bụ inye ọrụ ndị yiri ya.
· Na -eme nyocha nke ime maka mmepe teknụzụ na ngosi
· Ịrụ ọrụ iji nyochaa ma ọ bụ jigide ogo ma ọ bụ nchekwa nke ọrụ ma ọ bụ ngwaọrụ nke anyị nwe, rụpụtara, rụpụtara maka, ma ọ bụ na -achịkwa ya, yana iji melite, kwalite, ma ọ bụ kwalite ọrụ ma ọ bụ ngwaọrụ.
· Na -akwalite ọdịmma azụmahịa ma ọ bụ akụ na ụba mmadụ, dị ka site n'ime ka onye ọzọ zụta, ịgbazinye, ịgbazinye, sonye, ​​denye aha, nye, ma ọ bụ gbanwere ngwaahịa, ngwongwo, ihe onwunwe, ozi, ma ọ bụ ọrụ, ma ọ bụ mee ma ọ bụ mee ya, ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ na -apụtachaghị ìhè, azụmahịa azụmahịa
Ngosipụta ma ọ bụ ire ozi nkeonwe
Tebụl na -esote na -akọwapụta usoro nke Ozi Nkeonwe nke anyị kpughere maka ebumnuche azụmaahịa nye ndị na -enye ọrụ ma ọ bụ resị ya ndị ọzọ n'ime ọnwa iri na abụọ gara aga ụbọchị 'edegharịrị ikpeazụ' nke ọkwa Nzuzo a na, maka otu ọ bụla, ụdị ndị na -enye ọrụ. ma ọ bụ ndị ọzọ nke erere ma ọ bụ kpughee Ozi Nkeonwe:
Uzo nke Ozi Nkeonwe
Ngalaba ndị na -enye ọrụ
Udi nke ndi otu ato
· Ndị mmekọ azụmahịa / ụlọ ọrụ mmekọ
· Onye na -eweta nyocha data
· Ahịa ahịa mpụga
· Social netwọk
· Netwọk mgbasa ozi
· Iwu mmanye / arịrịọ iwu
Ozi ma ọ bụ ozi metụtara ọrụ
· Azụmaahịa mpụga
Ndekọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ azụtara, nweta ma ọ bụ tụlee
Kuki, mgbama, mkpado pixel, ihe nchọpụta mgbasa ozi ekwentị, ma ọ bụ teknụzụ ndị ọzọ yiri ya
Nkewa echekwara (dịka, okike na ọnọdụ alụmdi na nwunye)
· Ụlọ ọrụ na -ere ahịa
Nchịkọta ewepụtara site na ozi dị n'elu iji mepụta profaịlụ gbasara ndị ahịa na -egosipụta mmasị onye ahịa, njirimara, ọnọdụ akparamagwa, atụmanya, akparamagwa, akparamagwa, ọgụgụ isi, ikike na nka.
Ịzụta ma ọ bụ rie akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ ọchịchọ
Anyị anaghị ama ụma anakọta ma ọ bụ ree Ozi Nkeonwe nke ụmụaka n'okpuru afọ 16.
(ii) Ikike ịrịọ ka ehichapụ ozi nkeonwe
Ọ bụrụ na ị bụ onye bi na California, ị nwere ikike ịrịọ ka anyị hichapụ Ozi Nkeonwe gbasara gị nke anyị chịkọtara. Agbanyeghị, site na CCPA, a chọghị ka anyị rube isi na arịrịọ ka ihichapụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka anyị debe ozi nkeonwe iji, dịka ọmụmaatụ, mezue azụmahịa, chọpụta ihe mere nchekwa, rube isi n'iwu, ma ọ bụ ma ọ bụghị, jiri Ozi Nkeonwe, n'ime, n'ụzọ iwu kwadoro nke dabara na ọnọdụ nke ị nyere ozi ahụ.
(iii) Ikike ịpụ ọrịre nke ozi nkeonwe
Ọ bụrụ na ị bụ onye bi na California, ị nwere ikike iduzi anyị ka anyị kwụsị ire ozi nkeonwe gị.
CCPA na -akọwa '' ire '' pụtara ịre ahịa, ịgbazinye ego, mwepụta, ikpughe, ikesa, inye ohere, nyefee, ma ọ bụ jiri ọnụ kwuo okwu, na ederede, ma ọ bụ site na elektrọnik ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ, ozi nkeonwe nke onye bi na California na azụmaahịa ọzọ ma ọ bụ ndị ọzọ. maka ego ma ọ bụ echiche ndị ọzọ bara uru.
Iji pụọ na ojiji anyị ji kuki mgbasa ozi ndị ọzọ, biko hụ ngalaba Kuki dị n'elu. Ị nwere ike nyefee arịrịọ maka ịpụ ahịa site na ịpị njikọ a: "Agbarala Ozi Nkem. ” I nwekwara ike nyefee arịrịọ site n'ịkpọ anyị na + 86 175 0843 8176.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịwepu aha na nkwukọrịta ahịa anyị, biko họrọ njikọ wepu aha n'okpuru nkwukọrịta email anyị ma ọ bụ zitere anyị email na
(iv) Ikike ịkpa oke maka mmemme nke ikike nzuzo onye bi na California
Anyị agaghị akpa ókè megide ndị bi na California ma ọ bụrụ na ha jiri ikike ọ bụla enyere na CCPA dị ka akọwara na ngalaba a Ndị bi na California. N'ihi nke a, anyị agaghị agọnarị onye bi na California ngwongwo ma ọ bụ ọrụ; kwụọ ụgwọ ma ọ bụ ọnụego dị iche iche maka ngwongwo ma ọ bụ ọrụ, gụnyere site n'iji ego ma ọ bụ uru ndị ọzọ ma ọ bụ ịta ntaramahụhụ; nye onye bi na California ọkwa ma ọ bụ ịdị mma nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ dị iche iche; ma ọ bụ tụọ aro na onye bi na California ga -enweta ọnụ ahịa ma ọ bụ ọnụego dị iche maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ma ọ bụ ọkwa dị iche ma ọ bụ ịdị mma nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Agbanyeghị, enyere anyị ikike ịkwụ onye bi na California ụgwọ ma ọ bụ ọnụego dị iche, ma ọ bụ nye ọkwa ma ọ bụ ịdị mma nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, ma ọ bụrụ na ọdịiche ahụ nwere ezi uche na ọnụ ahịa data onye ahụ nyere anyị.
Otu esi edobe arịrịọ iji mara ma ọ bụ hichapụ
Ị nwere ike nyefee arịrịọ ka ịmara ma ọ bụ hichapụ site na ịkpọ anyị na +86 175 0843 8176.
Usoro anyị maka ịlele arịrịọ ịmara ma ọ bụ hichapụ
Ọ bụrụ na anyị ekpebie na arịrịọ gị dabere na mwepu ma ọ bụ wezuga, anyị ga -agwa gị mkpebi anyị. Ọ bụrụ na anyị ekpebie na arịrịọ gị esighị n'okpuru nnwere onwe ma ọ bụ wezuga, anyị ga -emezu arịrịọ gị mgbe ekwenyechara na njirimara gị yana, ruo n'ókè ọ dị mkpa, njirimara nke onye bi na California n'aha onye ị na -arịọ arịrịọ a.
Anyị ga -enyocha njirimara gị ma ọ bụ '' ezi ezi nke ezi uche '' ma ọ bụ '' oke ezi ntụkwasị obi '' dabere na mmetụta nke Ozi Nkeonwe yana ihe egwu nwere ike imerụ gị ahụ site na mkpughe ma ọ bụ nhichapụ na -enwetaghị ikike.
Maka arịrịọ maka ịnweta ozi nkeonwe yana maka arịrịọ ka ihichapụ ozi nkeonwe nke na -adịghị emetụ n'ahụ ma ghara itinye ihe egwu nke mmerụ site na nhichapụ na -enyeghị ikike, anyị ga -enyocha njirimara gị ka ọ bụrụ '' ezi uche '' site na ịlele ma ọ dịkarịa ala data abụọ. isi ihe ndị i nyeburu anyị nke anyị kpebisiri ike ịbụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi maka ebumnuche inyocha njirimara.
Maka arịrịọ ka ịnweta ozi nkeonwe nkeonwe ma ọ bụ maka arịrịọ ka ihichapụ ozi nkeonwe nke dị nro ma nwee ihe egwu nke nhichapụ site na nhichapụ na -enyeghị ikike, anyị ga -enyocha njirimara gị ruo '' oke ezi ezi ezi uche '' site na ịlele opekata mpe atọ. Ozi nkeonwe enyere anyị na mbụ nke anyị kpebisiri ike ịbụ ntụkwasị obi na ebumnuche nke ịchọpụta njirimara. Na mgbakwunye, a ga -achọ ka ị nyefee nkwupụta bịanyere aka n'akwụkwọ ntaramahụhụ nke ịjụ iyi ụgha na -ekwupụta na ị bụ onye a na -arịọ ozi nkeonwe ya.
Ndị ọrụ ikike
Ọ bụrụ na ị na -etinye arịrịọ n'aha onye bi na California, biko nyefee arịrịọ ahụ site na otu ụzọ akọwapụtara nke a tụlere n'elu. Mgbe anyị nyefere arịrịọ a, anyị ga -achọ ozi ndị ọzọ iji nyochaa ikike gị ime ihe n'aha onye bi na California.
Nwuo Iwu Ìhè
Anyị nwere ike kpughere ozi nkeonwe ndị ọzọ maka ha ka ha were gị ngwaahịa na ọrụ ha ozugbo. Ọ bụrụ na ị bụ onye bi na California, Koodu Obodo California § 1798.83 na -enye gị ohere ịrịọ ozi gbasara ozi nke ekpughere n'afọ kalenda gara aga yana njirimara ndị ọzọ. Iji mee ụdị arịrịọ a, biko zigara email [email protected] na ahịrị isiokwu "Nwuo arịrịọ ọkụ".
Anyị na -agba mbọ ịhụ na ndị nwere nkwarụ nwere ike nweta amụma nzuzo a. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnweta amụma nzuzo a n'ụdị ọzọ, biko kpọtụrụ anyị dị ka ekwuru n'elu n'okpuru ngalaba ịkpọtụrụ anyị.
Anyị nwere ike imelite ọkwa Nzuzo a site n'oge ruo n'oge. Anyị ga -agwa gị maka ụdị mgbanwe ọ bụla, gụnyere oge ha ga -amalite, site na imelite ụbọchị "Edegharịrị ikpeazụ" n'elu ma ọ bụ dịka iwu chọrọ si dị.
2001-2021 echekwara ikike Sinocare AIl